I-5a-hydroxy Laxogenin Powder Manufacturers
I-5a-hydroxy laxogenin powder inesilinganiso se-anabolic / androgenic esifana ne-Anavar powder, kodwa ngaphandle kwemiphumela emibi noma ubuthi besibindi.Amandla azokwanda ngezinsuku ze-3-5, futhi isisindo se-muscle esinciphile sikhula emavikini angu-3-4. I-5a-hydroxy-laxogenin iyi-steroidal sapinogen. Ukuhlolwa kubonise ukuthi ukwakheka kwamaprotheni kukhuphuke ngaphezu kuka-200%, okuyisihluthulelo sokukhula kwemisipha ethambile kanye nokulungiswa okusheshayo.
Umthamo: 1050kg / inyanga
Ulwazi lwamakhemikhali lwe-5a-hydroxy laxogenin powder
Igama Product I-5a-hydroxy laxogenin powder
omqondofana 5alpha-Hydroxy laxogenin; 5-alpha-Hydroxy-laxogenin; 5 i-alpha hydroxy laxogenin; 5-alpha hydroxy laxogenin; 5-alpha-hydroxy laxogenin; 5 i-hydroxy laxogenin; 5a-hydroxy Laxogenin
Isithako Purity >= 99%
CAS Inombolo 56786-63-1
I-Drug Class I-analogue ye-spirostani ye-brassinosteroid
InChI Key I-HCRGPOQBVFMZFY-PPCFKNSFSA-N
Formula Yamamolekhula C27H42O5
isisindo Yamamolekhula 446.6
IMisa ye-Monoisotopic 446.30322444
I-Melting Point I-247-250 ° C
ukubila Point 578.4 ± 50.0 ° C (Kubikezelwe)
Eimpilo enqunyelwe isigamu sempilo 6-8 amahora
solubility I-DMF: 15mg/mL; I-DMSO: 10mg/mL
Sithempeli le-torage Kuvalwe endaweni eyomile, Ezinga lokushisa Legumbi
Isicelo Isengezo; ukwakha umzimba; thola imisipha
Abakhi bomzimba nabasubathi bavame ukubheka izindlela zokwandisa imisipha ethambile ngaphandle kokwandisa okuqukethwe kwamafutha emzimbeni. Enye yezindlela ezilula zokufeza lokhu ukusebenzisa ama-anabolic steroids, kodwa ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwalezi zidakamizwa kunemiphumela ethile engemihle engase ibe yi-off-putting kwabaningi.
Ucwaningo lwakamuva zithole okuphuma kwesitshalo okukholakala ukuthi ososayensi banemiphumela efanayo ne-anabolic steroids, nokho, ngaphandle kwemiphumela emibi ye-steroids.
Inhlanganisela yaziwa ngokuthi i-5a hydroxy laxogenin ngokuvamile noma ngegama layo lesayensi, i-5-alpha-hydroxy laxogenin. I-5a i-hydroxy laxogenin powder ithengiswa ngabahlinzeki abaningi be-5a hydroxy laxogenin powder njengesengezo sokwakha umzimba ngenxa yezinzuzo eziningi zomkhiqizo.
Iyini i-5a-hydroxy laxogenin?
I-5a-hydroxy laxogenin, iphuma ku-laxogenin, ikhemikhali etholakala emvelweni, ezitshalweni. I-Laxogenin noma i-3beta-hydroxy-25D,5alpha-spirostan-6-one, i-anabolic steroid esekwe esitshalweni esidume kakhulu kubasubathi nabakhi bomzimba ngenxa yezakhiwo zayo zokuqinisa imisipha.
Isizathu sokwanda kodumo lwamaLaxogenins yindima yawo ezitshalweni. Amahomoni ezitshalo, abuye aziwe ngokuthi ama-brassinosteroids anesakhiwo futhi asebenzayo, afana ncamashi namahomoni esilwane nama-steroid womuntu. Ngenxa yalokhu, bathatha indawo ye-anabolic steroids.
I-Laxogenins ingatholakala ku-anyanisi waseShayina noma iziqu ezingaphansi komhlaba zesitshalo sase-Asia, i-Smilax sieboldii. I-Laxogenins, kuzithako eziningi ezikhiqizwa futhi ezithengiswa ngumkhiqizi we-powder we-5a-hydroxy laxogenin, empeleni athathwe kwesinye isitshalo se-steroid diosgenin. Lesi sitshalo se-steorid siphinde sisetshenziswe ekuhlanganiseni amanye amahomoni amaningi okwenziwa njenge-progesterone, esetshenziswa kakhulu kumaphilisi okulawula inzalo.
Imikhiqizo eminingi ene-5a hydroxy laxogenin powder ethengiswayo, njengesengezo, iqukethe lokhu okuphuma ku-laxogenin, etholakala ku-diosgenin, esikhundleni sokuba ne-laxogenin yemvelo. Nokho, lokhu akukhona noma yikuphi ukukhathazeka okukhulu njengoba izinzuzo ze-5-alpha-hydroxy-laxogenin zifana nalezo ze-laxogenin.
Ingabe i-5-alpha-hydroxy laxogenin iyi-prohormone?
Abakhiqizi abaningi be-5a hydroxy laxogenin kanye nabahlinzeki be-5a hydroxy laxogenin powder babhala i-compound njenge-prohormone. I-prohormone iyisithako lapho uma isemzimbeni, izobhekana nezinguquko ukuze ibe ihomoni ethile.
Isibonelo esifanelekile singaba ama-androgens, asebenza njengama-prohormones futhi uma esengenile futhi enziwe nge-metabolized, aguqulele ku-hormone, i-testosterone. I-5a i-hydroxy laxogenin powder ayiyona i-pre-hormone njengoba ingaguquki ibe i-hormone, kodwa kunezinzuzo ezifanayo njenge-hormone ye-steroid.
Ingabe i-5-alpha-hydroxy laxogenin iyi-steroid?
I-5a hydroxy laxogenin iyisitshalo se-steroid esabelana ngokufana okumbalwa namahomoni e-steroid ezilwane. Ifana kakhulu namahomoni ocansi emzimbeni womuntu atholakala ku-cholesterol. Kubalulekile ukuveza ukuthi i-5a hydroxy laxogenin powder inomsebenzi wokuthuthukisa ukukhula ezitshalweni kodwa imiphumela yayo emzimbeni womuntu iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho.
Kunokuba idlule kulwelwesi futhi yenze ushintsho ngokwayo, le nhlanganisela ibophezela kumamukeli futhi isebenze uchungechunge lokubonisa, oluphela ngokukhula okuphawulekayo kwamakhono okwakha imisipha yomzimba.
Iphrotheni ethile ecushwe yi-5a hydroxy laxogenin powder iyiprotheyini kinase B noma i-AKT 1. Le phrotheni iyaziwa kakhulu ngekhono layo lokungagcini nje ukwandisa ukukhiqizwa kwemisipha emzimbeni womuntu kodwa futhi nokuvimbela ukuwohloka kwemisipha.
Amaprotheni emisipha ayawonakala ngesikhathi sokusebenza okuningi kodwa kucatshangwa ukuthi izinzuzo ezihlukahlukene ze-5-alpha-hydroxy laxogenin zihlanganisa ukuvimbela ukuwohloka kwamaprotheni kanye nokuwohloka ngesikhathi sokusebenza.
Enye indlela lapho i-5a hydroxy laxogenin powder ikhiqiza khona izinzuzo ezikhangayo kubakhi bomzimba nabagijimi iwukuvimbela ukuwohloka kwe-enzyme ebalulekile, okungukuthi, i-cAMP.
Ukwandisa inani lale enzyme emzimbeni ngokuvimbela ukuwohloka kwayo ngenxa yalokho kuholela ekwandeni kokuwohloka kwamafutha emzimbeni. Ngasikhathi sinye, ukwandisa le enzyme nakho kuholela ekuphenduleni okuthuthukisiwe kokulwa-noma-ukundiza.
Sekukonke, abahlinzeki be-5a hydroxy laxogenin powder bathengisa umkhiqizo okhulisa imisipha, unciphisa ukuwohloka kwamaprotheni, futhi ukhuphule ukuwohloka kwamafutha, konke ngesikhathi esisodwa. Le miphumela kukholakala ukuthi iyenzeka njengoba lena kuyimiphumela evame ukubonakala ezinhlotsheni ezahlukene zezifundo ze-5a hydroxy powder ezenziwa kumamodeli ezilwane noma ku-vitro, elebhu. Kodwa-ke, le miphumela ingase ingabonakali emzimbeni womuntu lapho izithako ezithengiswa ngabakhiqizi abahlukene be-5a hydroxy laxogenin powder zithathwa.
Ingabe i-5a-hydroxy laxogenin iyafana ne-Laxogenin: 5a hydroxy laxogenin vs laxogenin
I-5a-hydroxy laxogenin itholakala kuhomoni yesitshalo, i-laxogenin. Zinezinzuzo ezifanayo, ngokusho kwezingcezu ezihlukene zocwaningo olwenziwa kumamodeli ezilwane. Nokho, azifani.
Yenzani i-5-alpha-hydroxy laxogenin?
I-5-alpha hydroxy laxogenin ifana kakhulu namahomoni ocansi ahlanganiswa kusuka ku-cholesterol emzimbeni womuntu. Lawa mahomoni ocansi atholakala ngokwemvelo emzimbeni womuntu asebenza kuma-nuclear receptors, kuyilapho i-5a hydroxy laxogenin inamathela kumamukeli weselula, phezu kweseli.
Izinkampani eziningi ezine-5a hydroxy laxogenin powder ezithengiswayo zivame ukuthengisa lesi sengezo ngesikhangiso sokuthi sinamandla afinyelela kumaphesenti angama-200 futhi singathuthukisa ithoni yemisipha phakathi kwabasubathi kakhulu. Lezi zimangalo ezenziwe abakhiqizi abahlukene ziwumphumela wezifundo ezimbalwa ezenziwe ngenhloso yokuhlola izakhiwo zokuthuthukisa imisipha ye-laxogenins.
Ucwaningo lwakamuva lwaseRussia mayelana nezinhlobo zezilwane luthole ukuthi izinhlanganisela ze-thermogenic ziphuma eqenjini elifanayo lamahomoni ezitshalo njenge-laxogenin, anemiphumela efanayo ne-laxogenin. Ngokwalolu cwaningo, lezi ziphuma ze-brassinosteroid zikwazile ukwandisa okuqukethwe kwamaprotheni esibindi, inhliziyo, izinso, nemisipha yomlenze. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi bathola ukuthi lezi zinto eziphuma kuzo azizange zikhiqize lezi zinzuzo ngokuphindaphinda noma ukulingisa umphumela wamahomoni ocansi emzimbeni womuntu.
Olunye ucwaningo olwenziwe futhi kumamodeli ezilwane kanye namahomoni asetshenziswa ekilasini elifanayo lamahomoni ezitshalo njenge-laxogenin akwazi ukuphindaphinda imiphumela efanayo nocwaningo lwaseRussia. Ezinye izingcezu eziningi zocwaningo zenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuba semthethweni kwale miphumela futhi imiphumela yatholakala iphindaphindeka kalula, yingakho, iqinisekisa amandla kanye nokusebenza kahle kwayo.
Kubalulekile ukuveza ukuthi nakuba abasebenzisi abaningi be-5a hydroxy laxogenin powder bathi babona imiphumela abathengisi abaye bakhangisa ngayo, ukuthola ubufakazi obuphathekayo besayensi bokusekela ukusetshenziswa kwabo kuye kwaba nzima. Iningi locwaningo lwenziwa kumamodeli ezilwane futhi lisebenzisa izinhlanganisela ezingaba ingxenye yamahomoni e-brassinosteroid noma i-hormone yesitshalo efanayo, i-phytoecdysteroids. Ama-laxogenin afana nalawa mahomoni futhi i-5a hydroxy laxogenin iphuma kuma-laxogenins, kodwa lokho akuqinisekisi izinzuzo ezifanayo ezibonwa namanye amahomoni.
Ucwaningo olulodwa olwenziwa kusetshenziswa i-laxogenin yemvelo kanye neyokwenziwa endaweni yelabhorethri yathola ukuthi le powder inganciphisa ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative emzimbeni kakhulu. Ukwehliswa kokucindezeleka okwenziwe nge-oxidative ngama-laxogenins kwenziwa ngokunciphisa ama-radicals mahhala, uhlobo lwento eyingozi emzimbeni engabamba iqhaza ekuphenduleni kwamakhemikhali okuhlukene futhi ilimaze umzimba ngokuphawulekayo. Lokhu kuncipha kwama-radicals mahhala kanye nokucindezeleka okwenziwe nge-oxidative kungachaza ukuthi i-5a i-hydroxy laxogenin powder ikwazi kanjani ukuthuthukisa ukubuyiswa kwemisipha, emva kokuzivocavoca. Kodwa-ke, lolu cwaningo kufanele lwenziwe kuzo zombili izinhlobo zezilwane nezihloko zabantu ngaphambi kokuba imiphumela yocwaningo ikholwe kabanzi.
Zonke lezi zifundo ezibalwe ngenhla zenziwa ngenhloso yokuthola ukuthi i-laxogenins ingakwazi yini ukukhulisa imisipha nethoni. Nokho, ukusetshenziswa kuphela kwe-5 alpha-hydroxy laxogenin akukona ukwakha umzimba futhi yilokho ezinye izingcezu zocwaningo ebezinethemba lokukufakazela.
Ezifundweni ezimbili ezihlukene, ukusetshenziswa kwe-5-alpha-hydroxy laxogenin powder ezigulini zomdlavuza wekoloni kunciphisa ubukhulu bomdlavuza kakhulu. Ngokufanayo, ukuthuthukiswa komdlavuza wamaphaphu kutholakale kuncishisiwe ngokusetshenziswa kwe-5a hydroxy laxogenin powder kumamodeli wezilwane. Yize lezi zifundo zingakwazi ukuhlinzeka ngobufakazi obuqand' ikhanda obudingekayo ukuze kufakwe noma yisiphi isengezo noma imithi kuphrothokholi yokwelashwa, ziyisinyathelo esiqonde ngqo.
Uyithatha nini i-5-alpha-hydroxy laxogenin?
I-5-alpha-hydroxy laxogenin powder dosage iqala kusuka ku-25 mg, futhi yilokho okufanele umuntu akuthathe nganoma yisiphi isikhathi esithile. Nokho, kuze kufike ku-6, futhi ubuncane be-3, imithamo ingathathwa usuku lonke, okwenza umthamo we-supplement, 150 mg ngosuku. Kunconywa futhi ukuthatha i-powder supplemental ngokudla ukwandisa ukumuncwa esiswini.
I-5a i-hydroxy laxogenin powder ingathathwa kuze kube yizinyanga ze-3 ezinyangeni ze-4 ngesikhathi ngoba yilapho imiphumela izobonakala khona. Ingathathwa ngokuqhubekayo isikhathi eside kunaleso uma sidingeka noma sifunwa. Njengoba i-compound yemvelo ingenawo umthelela emazingeni e-hormone yomzimba, ayidingi ukukhawulelwa esikhathini esifushane.
Imiphumela emibi ye-5-alpha-hydroxy laxogenin akwaziwa kahle ngoba iningi lezifundo ezenziwa ukuze kuhlolwe ukusebenza kahle kwesengezo azenziwa ezifundweni zabantu. Zenziwa kumamodeli ezilwane futhi akwenzeki ukunquma kokubili izinzuzo kanye nemiphumela engemihle evela kulezi zifundo. Kodwa-ke, abasebenzisi bezithako abazange babike noma yibuphi ubuthi noma imiphumela emibi, okuye kwaholela enkolelweni yokuthi i-supplement ayinayo imiphumela emibi.
Ubani okufanele acabangele ukuyisebenzisa?
Abakhi bomzimba, abagijimi, nanoma ubani omunye ongathanda ukwandisa ithoni ye-muscle nesisindo ngenkathi enciphisa okuqukethwe kwamafutha emzimbeni kufanele acabange ukusebenzisa i-5a hydroxy laxogenin powder.
Ingabe i-5-alpha-hydroxy laxogenin isemthethweni?
I-5a hydroxy laxogenin ithathwa njengesithako esingekho emthethweni i-Food and Drug Association noma i-FDA yase-United States ekhiphe izexwayiso eziningi ngayo. Isithako siqashwe yi-USADA isikhathi eside njengoba isithole ukuthi sisemikhiqizweni noma izithasiselo eziqukethe nezinye izinto ezithuthukisa ukusebenza. Esinye isizathu sokukhathazeka nge-5a hydroxy laxogenin powder yukuthi ikhangiswa njengemvelo, isitshalo se-anabolic steroid. Kokubili i-FDA kanye ne-USADA baphakamise imibuzo mayelana nomthombo wangempela we-5a hydroxy laxogenin njengoba umthombo wesitshalo wemvelo uhlinzeka ngehomoni ye-laxogenin kuphela. Akukachazwa ukuthi i-hydroxy laxogenin itholakala kanjani ku-laxogenin.
I-USADA yenze ukuhlaziya okuningiliziwe kwezimpushana ezihlukene ze-5a hydroxy laxogenin ezithengiswayo futhi yathola uhhafu walezo zithako ukuthi zifakwe izinto zokudotshwa. Emzamweni wokusindisa abasubathi kanye nomakhi womzimba ekudongeni ngengozi ngokusebenzisa le 'steroid yesitshalo semvelo', i-USADA ibacele ukuthi babheke noma yiziphi izithasiselo eziqukethe i-laxogenin okungenzeka kuthiwe ohlwini lwesithako njengokuthi:
I-USADA iphinde isole ukuthi igama elithi laxogenin ohlwini lwesithako lingaba inkomba efihliwe kulabo abafuna izithasiselo ze-doping, okusho ukuthi ayikho i-laxogenin yangempela noma i-5a hydroxy laxogenin esithasiselweni.
I-FDA, njenge-USADA, iyahlukahluka ngama-laxogenins ezithasiselweni zokudla njengoba lungekho ulwazi olwanele mayelana nokusetshenziswa kwayo, ukuphepha, namandla. Ngocwaningo olwengeziwe, kunethuba lokuthi isithako samukelwe njengesithasiselo esinamandla sokukhulisa imisipha.
Lokhu kungenzeka ngoba, ngaphandle kokuthi i-USADA imemezele ama-laxogenin nokuphuma kwawo njengento engekho emthethweni, i-World Anti-Doping Authorities ayizange ivimbele ukusetshenziswa kwakho phakathi kwabasubathi. I-5a i-hydroxy laxogenin ayihlangabezani nemibandela yokuthi ifakwe kusigaba njengento yokudotshwa.
Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwesidakamizwa i-5a hydroxy laxogenin bekungeke kube kuhle uma kubhekwa izinto zokudotshwa inqobo nje uma impushana ingaphazanyiswanga noma ifakwe ezinye izinto ezingavunyelwe.
5-alpha-hydroxy laxogenin Izibuyekezo
Iningi labasebenzisi be-5-alpha-hydroxy laxogenin powder bafunga ngayo futhi bathi babona yonke imiphumela ekhangisiwe ngokwabo. Cishe bonke abasebenzisi batusa ukusebenza ngokushesha kwesithasiselo ekwandiseni imisipha nethoni.
Kunezibuyekezo eziningi ku-inthanethi ezithi zibone ithoni ye-muscle ethuthukisiwe kanye nokwanda kwe-muscle mass, ngokunciphisa okuphawulekayo kwamafutha ngezinyanga ezintathu kuya kwezine kuphela zokusebenzisa i-5a hydroxy laxogenin powder.
Okungcono kakhulu kwe-5a-hydroxy laxogenin powder ukuthenga?
I-powder eyengeziwe ingathengwa ngabahlinzeki be-wholesale ye-5a hydroxy laxogenin uma idingeka noma ingathengwa ngamanani amancane. Impushana engcono kakhulu ongayithenga yilena ekhiqiziwe, yaphathwa, futhi yapakishwa ngeziqondiso eziqinile zokuphepha njengoba lokhu kuqinisekisa ukuthi i-5a hydroxy laxogenin ingangcoliswa futhi ayinazo izinto ezivinjelwe.
 I-5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin, Ivela Ezithasiselweni Ezengeziwe.
 I-LAXOGENIN KANYE NE-5-ALPHA-HYDROXY-LAXOGENIN EZISEKELWENI ZOKUDLA.
 Ukuqonda okusha ngobudlelwane besakhiwo-cytotoxicity be-spirostan saponins kanye nama-glycosides ahlobene.
 Ukuhlolwa kwama-anti-hypoxia/reoxygenation agents ngendlela ye-in vitro. Ingxenye 2: Ukuvinjelwa kokusebenza kwe-tyrosine kinase kuvimbele ukulimala okudalwe yi-hypoxia/reoxygenation ekuxhumaneni kwe-endothelial gap junctional intercellular.
 Umphumela we-Anabolic wesitshalo se-brassinosteroid
 I-Laxogenin - Ukusetshenziswa, I-Side Effects, nokuningi